Ewe, ngubani ongathandi iintyatyambo? Ewe, phantse wonke umntu unentyatyambo eyintandokazi, ingaba i-rose, i-orchid okanye i-cactus. Iintyatyambo nganye zifuna ukunakwa, ukunakekelwa nokunyamekela. Ngokukodwa iintyatyambo kwiibhotile. Kubo, ukunyamekela kufanele kube yinkqonkqo kakhulu, kuba iimeko zokugcina ezo ntyatyambo zendalo zihluke ngaphakathi.
Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi intyatyambo oyifumanayo, kungekudala okanye iya ku funeka ifakwe. Inkqubo yokutshintshwa kwezityalo zasemaphandleni imele ifake amanzi.
Ngendlela elula, ukucinywa kwamanzi kuyimfuneko ukwenzela ukuba iingcambu zezityalo ziphefumule kwaye kwakungekho ukuqokelela kwamanzi okutshabalalisa kwiingcambu. Njengoko uyazi, ngokuqhelekileyo kuyo yonke ibhokhwe kukho umgodi osezantsi ukwenzela ukukhutshwa kwamanzi angaphezulu. Kodwa oku akwaneleyo. Kungenxa yokuba ukuba intyatyambo ichithekile - iya kuqhubeka igalela embizeni ngamanzi amaninzi kwaye iingcambu ziya kubola. Umjelo uphinde ugweme oku. Kuya kuba yimanzi, engayi kuvumela ukuba iingcambu zome kakhulu, kodwa ngelo xesha kuya kubakho ukuqokelela kwamanzi.
Ukukhethwa komlambo kuxhomekeke ngqo kwipoteni ngokwayo kunye nomjelo wokucima kuyo, kunye neentyatyambo eziza kutyalwa kuwo.
Ukuba ibhokhwe iphakamileyo, i-substrate iya kumiswa ngokukhawuleza, kodwa ngaphakathi kwayo iya kuhlala imanzi. Ukuba ibhodlo liphantsi, ukutywa kwe-substrate kuya kuba yinto efanayo.
Njengoko umkhuba ubonisa, ubukho bomngxuma wamanzi kwiipate akusoloko kwanele. Ngoko ke, ukucinywa kwamanzi kuyimfuneko.
Ukuba ibonwa kwinqanaba lombono wekamva lomnini, kufuneka umntu aqwalasele iimpawu zesityalo. Ukuba ufuna ukutshala isityalo esifanele sakhawuleze ingcambu ingcambu, kufuneka ukuba ityalwe kwiipotyi ezincinci kwaye yenze i-drainage eyongeziweyo yokufikelela ngokukhawuleza kwe-oksijini kwizimpande. Ukuba utshala isityalo esidinga ukusikwa rhoqo kweengcambu, ngoko ungathatha ibhokhwe ephezulu, okanye uthathe umjelo wokugcina izinto eziza kugcina umswakama kwimali efunekayo.
Utywala lwezityalo zangaphakathi luvela kwizinto ezahlukeneyo. Ngokwenene, kunwetshwa udongwe, isanti, iipotshethi eziphukileyo, iitravel, ilitye etyumkileyo, izitena eziqhekekileyo okanye i-polystyrene. Kodwa into ebaluleke kakhulu ekukhethweni kwamanzi yinkqubo yokukhupha imichiza, ukumelana nokubunjwa, umthombo wamanzi. Kwakhona, umjelo kufuneka uvumele emanzini. Isixa somlambo ebhodweni sibalwa ngokuphakama kwawo kunye nobukhulu bomngxuma wamanzi. Inqanaba eli-1 cm elinomxholo omkhulu ngokwaneleyo ebhodweni. Kwezinye iimeko, i-2-5 cm okanye malunga ne-1 / 4-1 / 5 yokuphakama kwebhodi ekhethiweyo. Uluhlu oluncinane lomhlaba luqhutywe phezulu, lutyalwe lufefe kunye nomhlaba.
Kuthengiswa kuyo nayiphi na ivenkile yeentyatyambo. Liyitye elimdaka elinomphezulu ophezulu. Kukho amaqhezu amakhulu, aphakathi kunye amancinci. Ukutshiza kwemibala yendlu ngokuqhelekileyo kusetyenziswa amaqhezu aphakathi kunye namahle. Ubungakanani bodongwe olwandisiweyo kukuba kukhanya, okubaluleke kakhulu xa kusetyenziswa kwizimbiza ezinzima, kunciphisa amanzi amaninzi kwaye bubuyisela xa kuyimfuneko.
Le yendalo impahla eyenziwe ngokupheleleyo yobumba. Umjelo ogqithiseleyo, kodwa ungasetyenziswa ngokubanzi ngenxa yemigodi ebukhali, engonakalisa iingcambu xa zisetyenzisiweyo.
Ilitye elichithwe kunye negravel
Aba ne-pH yokungathathi hlangothi, kwaye bangangeni ekusebenzisaneni kwamakhemikhali. Ingxaki yabo kuphela kukuba baxakeke kakhulu, okwenza kube nzima ukuyisebenzisa.
Zizinto nje ezilula-shards ezivela ezimbizeni ze-ceramic eziphukileyo. Ngaphantsi kwebhodlo sibeka iintlanzi zobungakanani obuphakathi, kunye necandelo lomgca elibheke phezulu. Ngaphezu kwakho konke, sigcwalisa isanti, u-0.5-5 cm phezulu, uze uhlanyele isityalo.
Akunamanzi, ukukhanya, ukungabikho kwesikhunta kunye ne-chemistry inert. Kodwa simele sikhumbule ukuba xa sisisebenzisa, inkqubo yenkcenkce iyawuqinisa ngokuqinileyo kwaye xa isityalo sitshalisiwe, izimpande zityalo zilimala, kuba kunzima ukukhupha iplastiki ye-foam.
Naluphi na umbane owukhethayo, khumbula iziphakamiso ezingentla. Emva koko, ukhethwe ngokufanelekileyo kwaye ubeke umjelo kungumqinisekiso wesityalo esinempilo.
Cactus cleistocactus, unonophelo
Ikhalenda Lunar yefama yeloli ngoJuni 2016
I-horoscope yoBuntu kwiLibra ngo-2010
Izizathu zokunyusa izinga lokushisa ngokuhlwa
Ukutya ngokulahlekelwa yintlungu
I-Tortelli eneempompo kunye ne-ricotta
Iingubo eziphezulu ze-10 ezigqwesileyo kwixesha elizeleyo lonyaka-u-2017
Jeans Ideal: Indlela yokugqoka iLevis 501
Yiyiphi i-couturier okufuneka uyigqobe ukubonisa uphawu lwe-zodiac